Nifampitaona nanao ny fanambaram-pananana teny amin’Ivotoeran’ny Bianco Ambohibao ireo Tale Jeneraly sy Tale ary tomponandraikitra eo anivon’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka ny 28 jona 2019 teo. Lalàna velona no manery ny tsy maintsy anaovan’ny mpiasam-panjakana ambony sy olom-boafidy hanao fanambaram-pananana, ka nanatanteraka ny adidin’ireo tomponandraikitra ny teo amin’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, sy ho fijoroana amin’ny fahamarinana sy ny mangarahara eo amin’ny fitantanana. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 30 juin 2019 14:46
Beloha Androy - Tsihombe: Mivaha miandalana ny olana amin'ny rano fisotro
Vita ary notokanana omaly ny fantsona lehibe fitaterana rano fisotro madio ho an’ny tambazotra Ampotaka - Tsihombe - Faux Cap. Kaomina enina (Marolinta, Beloha, Tranovaho, Marovato, Nikoly ary Faux Cap) sy fokontany 21 (Mahafaly, Tanalavabe, Kirimosa, Zandroe, Sampeza, Bevaro Ambony, Beloha Nord, Barabay, Tranovaho, Lavanono, Soamagnitse, Beza, Ambalanosy, Ankororoka, Marovato, Soramena, Nosy Ala, Antanamalagny, Nikoly Centre, Bereny ary Amanda II) no voakasik’ity tetikasa ity, izay efa natomboky ny fitondrana teo aloha. Vahoaka miisa 30 000 no hisitraka mivantana ny fahazoana rano fisotro madio, miampy ireo olona 40 000 isa manodidina, avy ao amin’ny distrikan’i Beloha Androy sy Tsihombe.
vendredi, 28 juin 2019 09:01
Asaramanitra: Nanolotra fanomezana ho an’ireo zokiolona sy ankizy madinika ny Fiadidian’ny Praiminisitra
Nisitraka izany ny teny amin’ny fokontanin’i Mahazoarivo ny 25 jona 2019 teo, ho fanamarihana ny fankalazana ny faha-59 taona niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara. Nisolo tena ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta, Ntsay Christian, nitarika ny fizarana ny Sekretera Jeneralin’ny governemanta, Razanadrainiarison Rondro Lucette, notronin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny teo amin’ny Primatiora. (Jereo Sary Tohiny)
Mandoro ala ireo andian'olona monina ao anaty ala arovana amin'ny alan'ny Kirindy ao Lambokely rehefa tsy avela mamboly tsako sy maka hazo. Ala 10ha no efa potik'izy ireo farany teo, hazo "palissandre" maro no ripaka, ampahany ireto 50 tratra tao Kirindy teo ampitaomana azy ireto. Mpiasan'ny tontolo iainana, nanao fisafoana, no nahita azy ireo ka nampandre avy hatrany ny foibem-paritry tontolo iainana sy fampandrosoana maharitra.
Mandry andriran'antsy amin'ny asan-jiolahy ny mponina aty amin'ny Kaominina Anjiajia, Distrika Ambato Boeny, indrindra ireo mpivarotra. Ny herinandro lasa teo izao dia Fokontany telo no nasesin'ny dahalo notafihina. Notapahin'ny jiolahy tamin'izany ny tanan'ny vehivavy iray mitondra vohoka, nofirain'ireo jiolahy tamin'ny antsibe ihany koa ny tongotry ny vadiny. Nisy andia-miaramila mpampandry tany nandalo taty, saingy niserana ihany izany ka vao dila izy ireo dia miverina masiaka ny dahalo. Mitaintaina noho izany ny mponina, indrindra ny mpivarotra ka manao antso amin'ny mpitondra hijery vahaolana maharitra, hahafahan'ny olona mamokatra.
Ho fanampiana amin'ny tontolon'ny fahasalamana, dia notoloran'ny fanjakana, tamin'ny alalan'ny Filoha Andry Rajoelina fitaovana ny ministeran'ny fahasalamana, toy ny fiara, bisikileta, ary kojakoja maro samihafa momba ny fitsaboana. Ny Fanjakana nanome fiara hatao clinique mobile, na fitsaboana mitety vohitra, ny mpiara-miombon'antoka GAVI (Alliance Vaccin) sy ny UNICEF, nandray an-tanana ireo fitaovana hafa ihany koa, toa ny vata fampangatsiahana mandeha amin'ny herin'ny masoandro (Frigo solaire). Notontosaina tetsy amin'ny sekoly mpampihofana mpitsabo, INSPC tetsy Befelatanana ny hetsika androany. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 23 juin 2019 14:53
Kermesin'ny Foloalindahy: Ho avo folo heny ny hatsarany amin'ny 2020
Tonga nitsidika ny kermesin'ny Foloalindahy teo amin'ny Kianjan'i Betongolo - Antananarivo ny filoham-pirenena sady filoha faratampon'ny Foloalindahy, Andry Rajoelina. Nandritra izany no nilazana fa dia ho avo folo heny ny hatsaran'ny kermesin'ny Foloalindahy amin'ny taona ho avy, hankalazana ny faha-60 taonan'ny fahaleovantena. (Jereo Sary Tohiny)
Fifamoivoizana: Nampianatra ireo mpitondra moto hanara-dalana ny Polisy
“Aza miandry ny Polisy hiambina sy hanasazy vao hanara-dalàna" Ireo no ambetin-tenin'ireo Polisy avy amin’ny “Brigade des accidents” nanao fanentanana ireo mpitondra moto maro tsy manara-dalàna hita teto an-drenivohitra. Tsy fanaovana aroloha, fanaovana taingim-be miaraka amin'ny zazakely ary fandehanana eny amin'ny lalan'ny mpandeha tongotra no tena ataon'ireo moto eto an-drenivohitra ankoatra ireo tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny lafiny fifamoivoizana. Nanentana sy nanitsy ary nampianatra ireo mpitondra moto ny Polisy ho fiarovana ny ain'izy ireo manoloana ireo lozam-pifamoivoizana mifanesisesy teto an-drenivohitra. (Jereo Sary Tohiny)
Le mardi 18 juin, 2ème et dernier jour des examens, un jeune de 13 ans s'est évanoui juste avant la sonnerie d'appel du matin au lycée français d'Ambatobe Antananarivo. Les parents des autres enfants se sont accourus pour lui prodiguer les premiers secours, et certains se sont rués à chercher l'infirmerie du lycée français, mais ils ont mis du temps, faute de connaissance du lieu, car c'est juste un centre d’examen de leur enfants. Après quelques temps, l'infirmière est prévenue, mais elle a mis du temps pour rejoindre l'enfant, encore dans l'inconscience, car elle a attendu le flux des centaines d'enfants descendre les escaliers pour rejoindre leurs salles d'examen.
Nampahafantarina ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny Faritra Vakinankaratra sy ireo Distrika ary Kaominina voakasika ny fisian'ny tetikasa ho fanorenana toeram-pamokarana herinaratra goavana amin'ny reniranon'i Onive Vakinankaratra. Efa ho herintaona sy tapany no nirosoana tamin'ny fanadihadiana maro samihafa amin'ny hanorenana ity fotodrafitrasa goavana ity, ary miroso hatrany izany. Voakasik’ity tetikasa ity ny faritra Vakinankaratra sy Alaotra Mangoro satria ny tohodrano dia ao amin'ny Kaominina Belanitra, Distrikan'Antanifotsy no miorina ary ny foibe fanapariahana ny herinaratra dia any Sahofika-Anosiben'Ala no hipetraka. Hisy fanamboaran-dalana hiainga ao Antanifotsy hampifandray amin’ny faritra Alaotra-Mangoro haterak’io tetikasa io.